अब विद्युतको महसुल आइएमई पे मार्फत पनि तिर्न सकिने
काठमाडौं । विद्युत् महसुल वापतको रकम अबदेखि आईर्एमई पेबाट भुक्तान गर्न सकिने भएको छ । देश विदेशमा रहनु हुने सबैले यस्तो सेवामार्फत विद्युत् महसुल भुक्तान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईएको छ..
महालक्ष्मी लाइफको इजाजत खारेज नगर्न सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतल महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सको इजाजतपत्र खारेज नगर्न बीमा समितिलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधिश ओम प्रकाश मिश्रको एकल इजलासले कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयबाट पाएको इजाजत खारेज नगर्न..
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पुरानै कायम हुने
काठमाडौं । निर्वाचनको मुखमा आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन निर्देशन दिएपछि विहीबार बिहानै आयल..
बढ्यो डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको मूल्य, अब कति पुग्यो ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खना पकाउने एलपी ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगमले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टतिेल ग्यासको मूल्य बढाएको हो..
आन्तरिक राजश्व २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ५१ अर्ब ६२ करोड संकलन
काठमाडौँ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४-७५ को पहिलो तीन महिनामा राजश्व संकलन २४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार गत आवको तुलनामा चालू आवको असोज महिनासम्मको राजश्व..
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले तीन महिनामै ५१ करोडको सिमेन्ट बेच्यो
गाईघाट। देशकै ठूलो र सरकारी स्वामित्वमा रहेको जलजलेस्थित उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले तीन महिनाभित्र ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट बिक्री गरेको छ। साउनको पहिलो हप्तादेखि अहिलेसम्म उद्योगले छ लाख २० हजार बोरा..
अमेरिका । विश्वकै महंगो जुत्ता सार्वजनिक गरिएको छ । जसको मूल्यमात्रै १५.१ मिलियन डलर अर्थात् झण्डै डेढ अर्ब नेपाली रुपैयाँ रहेको छ । बेलायती डिजाइनर डेबी विंग्घमले यसको डिजाइन गरेकी हुन्,..
मारुती सिमेन्ट ‘१२ मा ६ खजाना’ का विजेता घोषित
काठमाडौं । मारुती सिमेन्टले आफ्नो नयाँ योजना ‘ १२ मा ६ खजाना’ का विजेताहरु घोषणा गरेको छ । उक्त योजनामा ग्राहकहरुले प्रत्येक १२ बोराको खरिदमा एउटा स्क्र्याच कुपन प्राप्तगर्ने छन् जसमा..
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले नेपालका ठूला परियोजनामा लगानीका लागि चिनियाँ लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्न नेपालका लागि चिनका राजदूत यु होङलाई आग्रह गरेका छन् । मंगलबार चौधरी ग्रुपको अवलोकन..
बडा दशैंलाई नयाँ नोट भदौ २८ गतेदेखि साट्न पाइने
काठमाडौं । बडा दशैं २०७४ को लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ २८ गतेदेखि नयाँ नोट सटही गर्ने भएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा थापाथलीमा रहेको राष्ट्र बैंकको कार्यालयबाट सटही गरिने व्यवस्था..
ङादी ग्रुप पावरले १० प्रतिशत बोनसपछि ३० प्रतिशत हकप्रद दिने
काठमाडौं । ङादी ग्रुप पावर कम्पनीले लगानीकर्तालाई बोनस शेयरपछि हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको भदौ १२ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले लगानीकर्तालाई १० प्रतिशत बोनस शेयरपछि ३०..
अड्किएका करिब ७०० मालवाहक सवारीसाधन भण्टाबारी नाकाबाट ल्याइने
मोरङ । भारतको मिरगञ्ज खोलाको पुल क्षतिग्रस्त हुँदा त्यहाँ अड्किएका करिब ७०० मालवाहक सवारीसाधन सुनसरीको भीमनगर–भण्टाबारी भन्सार नाकाबाट ल्याइने भएको छ । भन्सार विभागले विराटनगर भन्सार कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै भीमनगर–भण्टाबारी भन्सार..
गैँडाकोट। बिकु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले सहकारी क्षेत्रमा नेपालमै पहिलो पटक एटिएम सेवाको शुभारम्भ गरेको छ । सत्ताइसौँ वार्षिकोत्सव समारोहको अवसर पारेर संस्थाले सदस्य बीमा कार्यक्रम, एटिएम सेवा र..
काठमाडौँ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पिपल्स पावर लिमिटेडबीच विद्युत् खरिद सम्झौता भएको छ । प्राधिकरणमा आज आयोजित कार्यक्रममा प्राधिकरणका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक जलदीश्वरमान सिंह र प्रवद्र्धकका तर्फबाट भरतबहादुर खत्रीले उक्त..
काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको महशुल तिर्न लामो लाइनमा बस्नु भएको छ ? वा न्यूनतम महशुल तिर्नसमेत बढीभन्दा बढी खर्च गर्नुपरेको छ भने अब तपाईंले त्यस्तो झन्झट व्यहोर्नु पर्ने छैन। नेपाल..
दूधको मुल्य बढ्यो, अब प्रतिलिटर ७० रुपैयाँ पर्ने
काठमाडौं । आज भदौ १ गते देखि दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ बृद्धि भएको छ । दुग्ध विकास संस्थानको बैठकले दुधको मूल्य बृद्धि गरेको हो । दुग्ध विकास संस्थान र..
नेसनल ट्रेडिङमा ४ करोडका ‘ब्राण्डेड ह्वीस्की’ कामै नलाग्ने, जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई तलब
काठमाडौँ । नेसनल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले बिक्री-वितरणका लागि आयात गरेको वाइन, चुरोट, बियर, चकलेट, लिकर आदि सामान काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लामो समयसम्म ती सामान बिक्री(वितरण गर्न विभिन्न समस्या..
डावर नेपालको २५ वर्षः बार्षिक १० अर्बको कारोबार, १ हजारलाई रोजगारी
काठमाडौं । डावर नेपाल आफ्नो सेवा प्रारम्भ गरेको २५ वर्ष पुुरा गरेको छ । नेपालमा डावर नेपालको स्थापना सन् १९८९ मा भएको थियो र व्यापारिक उत्पादन सन् १९९२ बाट शुरु..
इन्धनको मुल्य घटेसँगै निजी वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिक भाडा घटाए
काठमाडौं । हवाई इन्धनको मूल्य घटेसँगै निजी वायुसेवा कम्पनीले आन्तरिक हवाई भाडा घटाएका छन् । नेपाल आयल निगमले केही दिनअघि हवाई इन्धनको मूल्य घटाएपछि वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले हवाई भाडा दर..
पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको मूल्य घट्यो, अब किन्दा कति पर्छ ?
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्याससहित पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले आइतबरा राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल मूल्य घटाएको हो ।..
काठमाडौँ। आगामी आर्थिक वर्षदेखि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विज्ञापन कर उठाउने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने भएको छ । काठमाडौँको विज्ञापन कर हालसम्म महानगरपालिकाले उठाउँदै आएकामा आगामी साउन १ गतेदेखि निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको..
काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका २२ प्रतिशत घरधनीले मात्र घरबहाल कर तिर्ने गरेका छन् । कामपा, राजस्व महाशाखा प्रमुख ध्रुव काफ्लेका अनुसार घरबहाल घर लिनका लागि ठोस किसिमको कानुन नहँुदा कामपामा रहेका..
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य घटाएको छ । निगमले शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल मूल्य घटाएको हो । निगमले तीनवटै पेट्रोलियम पदार्थमा..
बिज्ञापन कर काठमाडौं महानगरमा लक्ष्यभन्दा बढी असुली
काठमाडौं। काठमाडाँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको एक महिनामात्र बाँकी रहँदा लक्ष्यभन्दा एक करोड ५५ लाख रुपैयाँ बढी विज्ञापन कर सङ्कलन गरेको छ । चालु वर्षका लागि विज्ञापन करमा पाँच करोड रुपैयाँ..
काठमाडौं । वैज्ञानिक अनुसन्धान कार्यका सामाजिक अभियन्ता म्यागासेसे पुरस्कारबाट सम्मानित व्यक्तित्व महावीर पुनलाई बृज सुपर प्रिमियम ओपीसी सिमेन्टको ब्रान्ड एम्बेसडर भई यस कम्पनीलाई पु¥याउनु भएको योगदान स्वरूप राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका..
अनलाइनको माध्यामबाट चार महिनामा एक सय ४४ उद्योग दर्ता
काठमाडौं । उद्योग विभागले चार महिनामा अनलाइनको माध्यामबाट १४४ उद्योग दर्ता गरेको छ । माघ २ गतेदेखि अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको विभागले चार महिनामा १४४ उद्योग दर्ता गरेको हो । विभागका..
एभरेष्ट बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने
काठमाडौं । नेपाली बहुराष्ट्रिय कम्पनी माउण्ट एभरेष्ट (एमइ) ग्रुपले नेपालको पर्यटनलगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ । केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं रहेको सो कम्पनीले एमइ ट्राभल एण्ड टुर्स प्रालि नामक..
काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि ६.९४ प्रतिशत हुने भएको छ । गत आवको यही समयमा ०.०१ प्रतिशतको वृद्धि हुने अनुमान गरिएको थियो । चालु आर्थिक..
काठमाडौं । नेपालमा लगानी गरे मनग्य नाफा हुने उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताएका छन् । कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले नेपालमा लगानी गरी फाइदा लिनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह..
टिफाको तेस्रो बैठक भोली, अमेरिकी लगानी आकर्षित र व्यापार विस्तारमा सहयोगी हुने
काठमाडौं । नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार तथा लगानी सम्झौता (टिफा)को तेस्रो बैठक बिहीबार काठमाडौंमा हुँदैछ । नेपाली उत्पादनलाई अमेरिकी बजारमा प्रवद्र्धन एवम् बिक्री अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले नेपाल र अमेरिकाबीच २०६८..
Results 889: You are at page 10 of 30